Internet Svondo Guyana inofambira mberi neCaribbean tekinoroji yekuvandudza ajenda
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Nhau Nhau » Internet Svondo Guyana inofambira mberi neCaribbean tekinoroji yekuvandudza ajenda
Nhau Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Guyana Breaking News • Musangano Weindasitiri Nhau • nhau • Technology • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
Kutenderera pasirese, mashandiro evapari vemakomputa anotodarika hunyanzvi hwehurongwa hwemitemo yenyika. Hurumende dzakatarisana nekumanikidzwa nguva dzose kuti dziongorore kutyisidzira kwepasirese kwepasirese uye nekugadzira nzira dzakakodzera dzemuno dzekuchengetedza cyber
Mhiri kweCaribbean, hurumende dziri kuvaka kudyidzana kwakarongeka nevatambi vematunhu seCaribbean Network Operators Group (CaribbeanNOG) neCaribbean Telecommunications Union (CTU). CaribbeanNOG inzvimbo huru kwazvo yekuzvipira-yakavakirwa nharaunda enjiniya mainjiniya, nyanzvi dzekuchengetedza komputa uye tech aficionados.
Munguva pfupi yapfuura, CaribbeanNOG neCTU vaive pakati pevarongi veInternet Vhiki Guyana, musangano wemazuva mashanu wezve tekinoroji wakaitirwa neHurumende yeHurumende Yezvekufambiswa Kwevanhu, mukubatana nemasangano epasi rese seInternet Society, Internet Corporation yeMazita Akapihwa uye Nhamba (ICANN ), iyo American Registry yeInternet Numeri (ARIN), uye Latin America neCaribbean Internet Kero Registry (LACNIC).
Catherine Hughes, Gurukota rekutanga rezvekufambiswa kweruzhinji rweGuyana, vakati chiitiko chemazuva mashanu ichi chaive chikamu chehurongwa hwenyika hwekuvaka tekinoroji yenyika mukuchengetedza cyber uye dzimwe nzvimbo dzakakosha.
"Tinokurudzira hurumende dzeCaribbean kutanga zvirongwa zvemitemo uye kuwedzera kudyidzana mukati medunhu, kuitira kuti isimbise kugona kwenzvimbo," akadaro Kevon Swift, Head of Strategic Relations and Integration kuLACNIC.
“Sevagadziri vemitemo, hurumende dzinoita basa rakakosha mukupindura kumatunhu kumatambudziko ezvekuchengetedza cyber. Asi havagone kuita basa ravo vari vega, ”akadaro Bevil Wooding, Caribbean Outreach Manager kuAmerican Registry yeInternet Numeri (ARIN), uye mumwe wevatangi veCaribNOG.
"Masangano akazvimirira, vanoita zvemitemo, vatongi pamwe nemasangano anomiririra vanhuwo vane basa rekuona kuti vagari venzvimbo iyi nemabhizimusi vakachengeteka uye vakachengeteka."
Muvhiki rese, vamiriri kubva kumasangano ari kutora chikamu vakaratidzawo nzira dzinoshanda idzo vabatiri vanogona kushanda pamwechete kusimbisa uye kuchengetedza macaribbean eCaribbean.
Stephen Lee, mumwe muvambi weCaribNNOG, akashandura nyaya dzekuchengetedzwa kwepasi rose muzvinhu zvekutanga zveCaribbean, achitsanangura mamwe ematambudziko nemikana yekukosha kwakakosha kunharaunda.
Albert Daniels, Senior Manager weStakeholder Engagement muCaribbean kuICANN, akatsanangura iro basa resangano mukutsigira yakachengeteka network pasi rese.
Shernon Osepa, Manager, Regional Affairs yeLatin America neCaribbean paInternet Society, anga aripo kuvhura zviri pamutemo Internet Society Guyana Chapter, naNancy Quiros, Manager weChitsauko Development muLatin America neCaribbean paInternet Society, uye Lance Hinds, Anokosha Chipangamazano kuna Gurukota, uyo akashanda sechitsauko Mutungamiriri wenyika.
Asi kwaive kuungana kwevechidiki, kwakatambirwa neCTU pazuva rekuvhara musangano, kwakaisa chiratidzo chekudaidzira pavhiki rine simba. Vanenge mazana mana evadzidzi vanobva kuzvikoro zvesekondari zvinoverengeka vakapinda muchirongwa chemazuva ese, icho chaive chakazara nemavhidhiyo, mharidzo dzekudyidzana uye zvikamu zveQ & A, zvese zvakagadzirirwa kuratidza njodzi dzinooneka dzehunhu husina kuchengeteka pamhepo.
“CTU iri kuenderera mberi nekutsigira kuvandudzwa kwechikamu cheInformation and Communication Technologies (ICT) mudunhu iri kusanganisira kusimbisa pakushandisa kugona kwevechidiki. Pane kuyedza kwakabatana kuita kuti vechidiki vabatanidzwe mukati nekuvaita kuti vazive nezveITI zvinhu zvinovasanganisa, kukudziridza pfungwa yekuvandudza uye kuita bhizimusi, uye kuvadzidzisa mashandisiro ekushandisa simba rehunyanzvi ririmo mumaoko avo, "Akadaro Michelle Garcia, Nyanzvi Yezvekudyidzana kuCTU.
Kubudirira kwezuva kwakanyatso kuoneka mumashure maro. Kunyangwe mushure mekuvharwa kwepamutemo, buzz inooneka yakamirira mukamuri yemusangano, nevadzidzi vazhinji vakasara kuti vazvizivise kune vehunyanzvi mapaneru, vazhinji vachitora mukana wekuvakwazisa nemibvunzo yekutevera padivi.
Nemishumo yese, ino Internet Vhiki ichawedzera kuedza kweGuyana kuendesa pane chivimbiso chakavharirwa muchizvarwa ichocho chevatungamiriri vematunhu emangwana. Iye zvino basa chairo rinofanirwa kuenderera mberi, kuitira kushandura kugona kweCaribbean kuita yeCaribbean chaiko.